News - Mitsubishi Motors Myanmar
Working Environment Health & Safety Practice
Working Environment Health & Safety Practice ကျွန်ုပ်တို့၏ Mitsubishi Motors Myanmar Service Center ကို Customer များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ချရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် Service Center ပတ်ဝန်းကျင်ကို အစဉ်အမြဲ သန့်ရှင်းပြုပြင်လျက်ရှိပါသည်။သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Mitsubishi Motors Myanmar Service တွင် ဝန်ဆောင်မှုယူခြင်းဖြင့် ကျေနပ်မှုများစွာ ရရှိစေမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် မိုင်ပေါင်းများစွာ မောင်းနှင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။”Servicing your car with us will leave youasatisfied customer, we go the extra mile.”MITSUBISHI MOTORS MYANMAR SHOWROOM […]
Together we will drive forabetter tomorrow
Together we will drive forabetter tomorrow https://www.youtube.com/watch?v=ruaWRUEy6SQTogether we will drive forabetter tomorrowMitsubishi Motors Corporation’s Global Environmental Campaign.Introducing our environmental and social contribution efforts “Together we will drive forabetter tomorrow”.
Pajero Sport Product Video
ASX Product Video
Mitsubishi Motors Myanmar Whatsapp
Mitsubishi Motors Myanmar Whatsapp Mitsubishi Motors Myanmar ကို Whatsapp မှ တဆင့်လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်… #MitsubishiMotorsMyanmar#DriveyourAmbition#Whatsapp
Mitsubishi Motors Myanmar Concept Showroom
Mitsubishi Motors Myanmar Concept Showroom Mitsubishi Motors Myanmar Concept Showroom (Myanmar Plaza) Mitsubishi Motors Myanmar Concept Showroom ကို ရန်ကုန်မြို့ Myanmar Plaza တွင် 27.5.2021 ရက်နေ့မှစ၍ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက် – 27.5.2021ဖွင့်လှစ်မည့်အချိန် – နေ့စဥ် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ Mitsubishi Motors Myanmar (Concept Showroom)G19B, Myanmar Plaza, No 192, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Tsp, Yangon.ဖုန်း – 09 […]
All New Attrage Live Launch – Facebook Live
All New Attrage Live Launch – Facebook Live FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 AT5PM UTC+06:30 –6PM UTC+06:30 Mitsubishi Motors Myanmar ၏ All-New Attrage ကားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲ Online Launch Event အခမ်းအနားကို 18.12.2020 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး Covid-19 ရောဂါပျံ့နှံ့နေသည့်အ‌‌ခြေအနေကြောင့် All-New Attrage 2021 Online Launch Event ကို online live ဖြင့် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ 18 ရက်နေ့ ည5နာရီမှစတင်၍ Mitsubishi […]
All New Pajero Sport 2020 Live Launch
“All New Pajero Sport 2020 Launch Event” Live Previous Next 31.10.2020 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲဲ့သော All New Pajero Sport 2020 Launch Live ပွဲပုံရိပ်များအား ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တယ်ရှင့် . . . All New Pajero Sport 2020 ဈေးနှုန်းကတော့ USD 63,800 ဖြစ်ပြီး ယခု Covid 19 ကာလအတွက် ကညနအခွန်ဌာနမှ RTA Reduction လျှော့ချသည့်ကာလအတွင်း USD 9600 Cash Back ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ပါ link များမှာ အော်ဒါမှာယူနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် . . Direct Link: https://mitsubishimotorsmyanmar.com/preorder/#DriveyourAmbition […]
MM Cars Myanmar LTD New Discounted Vehicle Price
MM Cars Myanmar LTD New Discounted Vehicle Price ၇-၈-၂၀၂၀ နေ့ရက်မှ စတင်၍ ပြည်ပတင်သွင်းယာဥ်မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများလျှော့ချပေးလိုက်သည့်အတွက် Mitsubishi Motors Myanmar မှ စည်းမျဥ််းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီး ကြေငြာစာစတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့် ၇ ရက်နေ့ မှစ၍ ကညနမှတ်ပုံမတင်ရသေးသော တစ်နည်းအားဖြင့် အခွန်ငွေမဆောင်ရသေးသော ကားများကို ကညနမှ လျှော့ချပေးသည့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြန်လည် Cash Back ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Mitsubishi Motors Myanmar မှ ပြန်လည် Cash Back ပေးအပ်သွားမည့် ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်…#DriveyourAmbition#MitsubishiMotorsMyanmar#ToTheNextStage2020#Announcement
Mitsubishi Day February 22, 2020
Xpander Awarded “Best Family MPV” in Myanmar Cars of The Year 2019 MM Cars Myanmar proud to announce that the Mitsubishi Xpander was voted the “Best Family MPV” in Myanmar. This is just one piece of great news from “MITSUBISHI MOTORS REBORN” campaign as we are about to close our best month in our history […]
© 2021 Mitsubishi Motors Myanmar, All Rights Reserved.